काम त गर्ने तर कसरी ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
काम त गर्ने तर कसरी ?
२०७० पुष २८, आईतवार ०३:४२ गते
संसार हाम्रा कर्महरुको अभिव्यक्ति हो । समाजमा यदि अमनचैन, शान्ति, सुरक्षा र कानुनी शासन छ भने हामीले तदनुसार काम गरेका रहेछौँ भन्ने प्रमाणित हुन्छ तर अशान्ति, असुरक्षा, भय र दण्डहीनता मौलाएका छन् भने हामीले राम्रा काम गरेका रहेनछौँ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । हामीले गर्ने काम राम्रो र नराम्रो हुनुका पछाडि हाम्रो उद्देश्य पनि जिम्मेवार रहन्छ । कुन उद्देश्यका साथ हामीले काम गरेका छौँ, त्यसैअनुसारको फल हामी स्वयम् र समाजले भोग गर्ने अवस्था आउँछ ।
हामीले गर्ने कामहरु व्यक्तिगत चरित्रनिर्माण र सामाजिक समुन्नतिको पवित्र उद्देश्य र भावना लिएर सम्पन्न गरिनुपर्दछ । आज व्यक्तिको चित्र र चरित्रमा आकाश–जमिनको अन्तर देखिन्छ । मानिसहरु क्षणिक स्वार्थ र वस्तुवादी लाभहानिको भावना लिएर कर्म गर्ने गर्दछन् । त्यसरी, एकाङ्की उद्देश्य लिएर गरिएका कुनै पनि कामहरुले समाज र व्यक्ति कसैलाई पनि भलो गरेका छैनन् ।
शास्त्रहरु भन्दछन्, कर्म पवित्र नभई त्यसको फल पनि पवित्र हुँदैन । पवित्र फलले नै सबैतिर पवित्रताको विकास गर्दछ । गीतामा कर्मलाई पनि सात्त्विक, राजस र तामस गरी तिन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । यदि सामाजिक मूल्यलाई कायम राख्दै व्यक्तिको आन्तरिक एवम् बाह्य विकासमा जोड दिने हो भने मान्छेका लागि सात्त्विक कर्मको विकल्प देखिँदैन । सत्त्वप्रधान कर्महरुले मात्रै समाजमा सुशासन र शान्तिको स्थापना गर्न सक्दछन् ।
राजस र तामसवृत्तिका कामहरुले समाजमा बचेखुचेको शान्ति र समृद्धि पनि नामेट बनाइदिन्छन् । व्यक्तिव्यक्तिका बीचमा वैमनस्य, झगडा र शत्रुता विकसित भएर जान्छ । नागरिक कर्तव्यबोधको कुनै थोपोछिटो बाँकी रहँदैन । व्यक्ति समाजभन्दा स्वयम्केन्द्री भएर जान्छ । सबैलाई बाँडौँ, मिलीजुली अवसरहरूको सदुपयोग गरौँ र परस्परको सहकार्यमा अप्ठ्याराहरुमा विजयी बन्न सकौँ भन्ने भावना लगभग समाप्त भएर जान्छ ।
गीतामा तीन प्रकारका कर्महरुका फरकफरक लक्षणहरुबारे चर्चा गरिएको छ । ‘नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्, अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।’— यो गीतामा बताइएको सात्त्विक कर्मको लक्षण हो । अर्थात्, जुन कर्म शास्त्रले निश्चित गरेको छ वा स्वीकृत गरेको छ, मैले गरेको हुँ भन्ने किसिमको कर्तापनको अभिमानबाट मुक्त छ र फलको आकाङ्क्षा नराख्ने व्यक्तिद्वारा विनारागद्वेष सम्पन्न गरिएको छ, त्यस्तो कर्मलाई सात्त्विक कर्म भनेर भनिएको छ ।
हाम्रा शास्त्रहरु व्यर्थ छैनन् । समयको गतिसँगै तिनमा कतिपय व्यावहारिक परिमार्जन र परिष्कृति आवश्यक त अवश्य पर्छन् नै, तर तिनले मूल रुपमा मनुष्य समाजको सर्वाङ्गीण हित र जीवनमूल्यको विकासका लागि निर्देश गरेका विषयहरु शाश्वत् र अपरिहार्य देखिन्छन् । शास्त्रहरु भनेका समाजका लागि एक किसिमले तत्कालीन संविधानजस्तै थिए । अहिलेका शास्त्रहरुमा परिवर्तन आएको हुन पनि सक्दछ, तर समाज भने शास्त्रहरुबाट सधैँ निर्देशित र परिचालित भइरहनुपर्दछ । गीताले भन्न खोजेका शास्त्र हाम्रा धर्मग्रन्थहरुसँगै देशको मूल कानुन पनि हो । जहाँ कानुन उल्लङ्घन गरेर काम गरिन्छ, त्यो समाजमा शान्ति कायम हुन सक्दैन ।
‘यो काम मैले गरेको हुँ’— यस्तो भावनाले गरिएको काम सबैका लागि हुँदैन । जुन काममा अहङ्कारको गन्ध आउँछ, त्यसले सबैतिर बिगार्दछ । यो काम मैले गरेको हुँ भन्नुको अर्थ अरु सबै अल्छी हुन्, मैले गरेको कामको फल मैले मात्रै पाउनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । यसरी, व्यक्तिले कर्तापनको अभिमानले युक्त भएर गरिएको कर्म असात्त्विक हुन पुग्दछ । त्यस्तै, रागद्वेष नराखी गरिएको कर्म पनि सात्त्विक कर्मभित्र पर्दछ । हामीले विभिन्न फल प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएर कर्म ग¥यौँ भने त्यसले कर्मलाई दूषित बनाइदिन्छ । हामीले फलको आशा गर्दै गरेका कामहरु जतिसुकै सुन्दर भए पनि कतै न कतै सङ्कीर्ण र त्रुटिपूर्ण रहेकै हुन्छन् । त्यसैले, शुद्ध कर्तव्यबोधको भावनाले उत्प्रेरित हुँदै शास्त्र र विधिसम्मत तरिकाले अभिमानरहित भएर हामीले गर्ने सात्त्विक कर्महरुले सबैको भलाइ र उन्नति हुन्छ भनेर गीतामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः, क्रियते बुहलायासं तद्राजसमुदाहृतम्’— भगवान् श्रीकृष्णले राजस कर्मका बारेमा यसरी बताउनुभएको छ । अर्थात् त्यो कर्म, जुन अति धेरै श्रमले युक्त हुन्छ र भोगको इच्छा राख्ने वा अहङ्कार गर्ने भोगी एवम् अहङ्कारी व्यक्तिद्वारा सम्पन्न गरिन्छ, राजस कर्म हो । राजाहरु अहङ्कारी हुन्छन्, घमण्डी पनि हुन्छन् । भोगको इच्छा राख्ने मानिसहरु आपैmँ राजसी हुन्छन् । उनीहरुको अन्तस्करणमा कर्तव्यको कुनै पनि स्थान हुँदैन । यस्ता मान्छेहरु अरुका लागि भन्दा आफ्नै लागि मात्र बाँच्दछन् । उनीहरु सोच्दछन्, संसारका सबै पदार्थहरु मेरो भोगका लागि हुन् र सबै मानिसहरुले मेरो सेवा गर्नुपर्दछ ।
राजस कर्म गर्नेहरुले आपूmबाहेक सबैलाई दास र सेवक ठानिरहेका हुन्छन् । उनीहरु कसैसँग हार्न वा झुक्न चाहँदैनन् । उनीहरुभित्रको अहङ्कार यति प्रबल हुन्छ कि प्राप्तिका लागि दिनरात नभनी अस्वाभाविक ढङ्ले श्रम गर्ने उनीहरुको बानी हुन्छ । यस्तो किसिमको अप्राकृतिक र लामो समयसम्मको श्रम सात्त्विक मानिँदैन । राजस कर्मले मानिस–मानिसका बीचमा कलह र वैमनस्य पैदा गर्दछ ।
सबैले ‘मैले यो काम गरेको हुँ’, ‘संसारमा म मात्रै श्रेष्ठ छु, बाँकी सबै निकृष्ट छन्’ भन्ने जस्ता दूषित भावना लिने गर्नाले नै सामाजिक मूल्यमा ह्रास आउने हो । राजसी कर्महरुले मानिसलाई अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने अत्यन्त जड र घमण्डी व्यक्तिमा रुपान्तरित गरिदिन्छन् । संसारको आजको अव्यवस्था, अराजकता र अनियमितता भनेकै अहङ्कारका उत्पादन हुन् । सात्त्विक कर्मले हामी हाम्रा कर्तव्य स्मरण गर्न सफल बन्दछौँ भने राजस कर्महरुले हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरुलाई विस्मृतिको खाडलमा पुरिदिन्छन् ।
अँध्यारोमा अन्धाधुन्ध सम्पन्न गरिने कर्महरु तामस कर्मभित्र पर्दछन् । गीतामा तामसी कर्मको लक्षण यसरी बताइएको छ, ‘अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरूषम्, मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ।’ अर्थात्, जुन कर्म त्यसको परिणाम, हानि, हिंसा, र सामथ्र्यलाई विचार नगरी केवल अज्ञानमा सुरु गरिन्छ, त्यो कर्म तामस कर्म भनेर मानिन्छ । तमस् भनेकै अँध्यारो हो । अँध्यारो अज्ञानको कारण हो । हाम्रा सबैसबै दुःख र अप्ठ्याराहरुको मुख्य कारण भनेकै अँध्यारो अर्थात् हामीभित्रको अज्ञान हो ।
ज्ञानी व्यक्ति सदा प्रसन्न हुन्छ । उसलाई कुनै पनि अवरोधहरुले रोक्न र छेक्न सक्दैनन्, किनकि उसका लागि न कुनै अवरोध हुन्छन्, न त छेकबार नै । उसले सबै अवस्थाहरुप्रति समान धारणा बनाउने हैसियत राख्दछ । ज्ञानी व्यक्ति अर्थात् उज्यालोमा बाँच्ने अभ्यास भएको व्यक्तिले दुःखको कारण, निवारण सबै जानेबुझेको हुन्छ । यो काम गर्दा यो परिणाम आउँछ भन्ने जानेर नै उसले गर्नुपर्ने काम मात्रै गर्दछ र जीवनमा आनन्दित हुन्छ ।
तर, अज्ञानी जहिले पनि दुःखी हुन्छ । तामसी स्वभावका मानिसहरु यस्तै दुःखी हुन्छन्, किनकि उनीहरुलाई आपूmले गर्ने कामको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने हेक्का हुँदैन । हामीकहाँ ‘कर्मकाण्ड’ भन्ने एउटा विधा छ । कर्म भनेको काम र काण्ड भनेको त्यसको सुसंस्कृत विवरण हो । अर्थात् हामीले गर्ने कामहरुको शास्त्र र विज्ञानसम्मत विधि र प्रक्रियाबारे बताइएको विधा नै कर्मकाण्ड हो । यो अद्भुत पद्धति हो, हाम्रो सभ्यताको । कर्मकाण्डमा हामीले गर्ने कामहरु कसरी शुद्ध हुन सक्दछन् र तिनले व्यक्ति अनि समाजको सर्वाङ्गीण समुन्नतिमा कस्तो असर पार्दछन् भनेर चर्चा गरिएको छ ।
हामीले कस्तो काम गर्दैछौँ ? त्यसको लाभ कति हुन्छ ? त्यसलाई हाम्रो सामथ्र्यले कत्तिको धान्न सक्दछ ? हामीले गर्ने कामले समाजमा हिंसा निम्त्याउँछ या निम्त्याउँदैन ? आदि प्रश्नहरुमाथि विचार नगरी गरिने सबैसबै कर्महरु तामस कर्महरु हुन् । यस्ता कर्महरुले कसैको पनि हित गर्दैनन् ।
हामीकहाँ भएको कर्मकाण्डको जुन पद्धति छ, यो हाम्रा समस्त कर्महरुलाई शुद्ध र सात्त्विक बनाउने पद्धति हो । हामीले बिहान उठेदेखि बेलुकी नसुतुन्जेलसम्म जे–जे गर्दछौँ, ती सबैको विधि कर्मकाण्डमा निर्धारण गरिएको छ । कर्मकाण्डलाई हामीले अत्यन्त सङ्कुचित र जड पद्धतिका रुपमा लिने गरेका छौँ, तर यो हाम्रो दैनिक र अत्यावश्यकीय जीवनव्यवहारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
कर्मकाण्डको उद्देश्यलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने यो निकै दूरदर्शी, व्यापक र उदात्त विषय रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । तर, सामान्य सतहबाट विश्लेषण गरेर हामीले यसलाई सङ्कीर्ण पद्धतिको एउटा अभ्यासका रुपमा मात्रै व्याख्या गर्ने दुस्साहस गरेका छौँ । यद्यपि, कर्मकाण्ड व्यापक र वैज्ञानिक धार्मिक पद्धति हो, तर यसका अभ्यासीहरुमा भने यसको वास्तविक मूल्यबोध भएको देखिँदैन । कर्मकाण्ड गराउने कार्यमा नियुक्त पण्डित र पुरोहितले कर्मकाण्ड गर्नुको विधि र विज्ञान बुझाउन नसक्दा र क्षणिक दानदातव्यमा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्ति देखाउँदा कर्मकाण्डप्रति जनसामान्यमा नकारात्मक धारणाको विकास भएर गएको हो ।
यसैले, आज व्यक्ति अपवित्र भएको छ, समाज अपवित्र भएको छ । राजसी र तामसी वृत्तिका मानिसको बोलवाला छ, किनभने हाम्रा कर्महरु राजसी र तामसी भएका छन् । कर्म शुद्ध नभइकन परिणाम शुद्ध हुँदैन र परिणाम शुद्ध नभइकन समाज पनि शुद्ध हुन सक्दैन । कर्ममा शुद्धताको महाअभियान प्रत्येक व्यक्तिले स्वयम्बाट आरम्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तपाईं–हामीले गर्ने कामहरु सात्त्विक, राजस वा तामस, कस्ता छन् ? आउनुस्, सात्त्विक, राजस र तामस कर्ताका लक्षणहरुबारे चर्चा गरौँ । गीताले भनेको छ, ‘मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः, सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ।’ अर्थात्, जुन मानिस अनेक मानिसका सङ्गतबाट मुक्त छ, अहङ्कार मिश्रित बचन बोल्दैन, धैर्य र उत्साहले युक्त छ, गरेको काम पूरा भएपछि परिणामको विषयलाई लिएर हर्षित हुने वा शोकाकुल हुने गर्दैन, त्यस्तो व्यक्ति नै वास्तवमा सात्त्विक कर्ता हो । सात्त्विक कर्म गर्ने व्यक्ति सदा उत्साही र धीर हुन्छ । कहिल्यै ठाडो र घमण्ड भरिएका शब्दमा बोल्दैन ऊ । गरेको कामले चाहे राम्रो फल देओस्, चाहे नराम्रो फल देओस्, उसले विभेद गर्दैन । यस्तो व्यक्ति सात्त्विक हो र उसले गर्ने कामहरु पनि जगत्का लागि उपयुक्त हुन्छन् ।
त्यस्तै, ‘रागीकर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः, हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।’— यो राजस कर्ताको लक्षण हो । अर्थात्, राजस कर्ता मनभरि विभिन्न लोभ र आसक्ति लिएर मात्रै काम सुरू गर्ने खालको हुन्छ । काम गर्दै जाँदा अरुले दुःख पाए पनि खुसी हुने गर्दछ । अरुलाई दुःख दिन चाहने स्वभाव हुन्छ । उसको शारीरिक र मानिसक शुद्धता हुँदैन । शरीरमा भएको मलमूत्र समयमै त्याग गर्ने, दैनिक स्नान गर्ने, सुन्दर पुस्तकहरुको अध्यनन गरी चिन्तामुक्त हुनेलगायतका कुनै पनि काम गर्दैन । ऊ अशुद्धाचारी हुन्छ र कामको फललाई लिएर हर्षित वा दुःखित हुने गर्दछ । यस्तो मानिस राजस कर्ता मानिन्छ ।
गीताले अति महत्त्वाकाङ्क्षा, आसक्ति र लोभले प्रेरित भएर गरिने कामलाई अपवित्र मानेको छ भने त्यस्ता मानिसहरुलाई राजसी कर्ताका रुपमा चित्रित गरेको छ । हामीसँग काम गर्ने अधिकार छ, तर फल प्राप्त गर्ने अधिकार छैन । काम गर्दै जाँदा जे–जति पाइन्छ, त्यसमै चित्त बुझाउनुबाहेक हामीसँग अर्को कुनै उपाय छैन । सात्त्विक कर्ताहरु यसरी आपूmलाई सम्झाउन सक्दछन् भने राजस र तामसहरु भने विचलित हुने गर्दछन् । यसैले, हामीले आपूmलाई तामस र राजस कर्ता बन्ने खतराबाट सधैँ बचाउनुपर्दछ ।
तामस कर्ताको लक्षण यस्तो छ ः ‘युक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलस ः, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ।’ अर्थात्, त्यस्तो कर्ता तामस कर्ता हो, जो युक्तिसङ्गग काम नगर्ने अयुक्त छ, शिक्षा र ज्ञानको उज्यालोले रहित छ, घमण्डी र धूर्त पनि छ, अर्काको जीविकाको पनि नाश गर्दछ, कामको परिणामलाई लिएर विषाद र शोक गर्दछ र अत्यन्त अल्छी छ र थोरै समयमा गर्न सक्ने कामलाई पनि पछि गर्दछु भनेर लामो समयसम्म साँचेर राख्दछ । यस्तो किसिमको कामलाई पछिका लागि साँच्ने तत्काल नगर्ने व्यक्ति तामसी कर्ता हुन्छ भनेर गीतामा उल्लेख गरिएको छ ।
तामस कर्ता ठीक–बेठीकको निक्र्योल गर्न पनि सक्षम हुँदैन । आफ्नो काम त समयमा सम्पन्न गर्दैन नै, अरुको कामको परिणाम, जीविकाको स्रोत अथवा कृति क्षय गर्न पनि पछि पर्दैन । यस्ता मानिसहरु कहिल्यै पनि आपूmले गरेका कामको फलप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दैनन् ।
यस प्रकार, राजस र तामस कर्मका कर्ताहरुको जति बिगबिगी भयो, समाज त्यति नै अनैतिक, अनियमित र अनुशासनहीन बनेर जाँदोरहेछ । हामी अधिकतम सात्त्विक कर्म गर्ने सात्त्विक कर्ता बन्नु परेको छ । हामी सात्त्विक नबनेसम्म हाम्रा कर्महरु पनि सात्त्विक हुन सक्दैनन् । सर्वजन हितायः, सर्वजन सुखायः पनि हामीले गीताका यी बचनलाई व्यावहारिक रुपमै आत्मसात् गर्नुछ । काम जे सोचेर जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट मुक्त भएर हामीले गर्ने कामको स्वरुप, त्यसले हाम्रो जीवन र समाजमा पार्ने असरबारे पनि सोच्नुपर्दछ । यसरी, जीवनका लागि सोचेर सार्थक रुपमा सम्पन्न गरिने कर्महरु नै यथार्थमा कर्म हुन् र सम्पन्न गर्ने कर्ताहरु कर्ता हुन् ।